Faallo: Sudaanta Koofureed iyo Socdaalka Xasan Sheekh – Kasmo Newspaper
Faallo: Sudaanta Koofureed iyo Socdaalka Xasan Sheekh
Updated - August 5, 2016 5:45 pm GMT
Mar kale ayaa Madaxweyne Xasan Sheekh safar galay, isagoo ku sii jeeda Caasimadda Itoobiya. Wuxuu ka qaybgelayaa kulan looga hadlayo dalka uu Madaxweynaha ka yahay Silva Kiir- Sudaanta Koofureed.
Hase ahaatee, maanka qofka caadiga ah waxaa ku soo dhacaya, oo “Somalia iyo Sudaanta Koofureed” middee ayaa mudnaanta leh, marka la fiiriyo mas’uuliyadda taal iyo madaxweyne Soomaali ah?
Waa run, Sudanta Koofureed waa dal Afrikaan ah, ka mid ah dalalka Bariga Afrika, dhibaato xoog lihina ka jirto, u baahan in xal loo helo! Hase ahaatee, Xasan Sheekh ma noqon karaa ninkii maanta Addis Ababa ugu safri lahaa in uu xal ka keeno Sudanta Koofureed?
Xasan Sheekh, Madaxda shirka Addis Ababa ka qaybgelaysa, waa ogyihiin in 4 toddobaad iyo wax ka yar uga harsan yihiin mudadii xilkisa. Waxay kaloo ogyihiin in uu yahay hoggaamiye guuldarraystay, macno kasta oo guuldarro leedahay. Waxay ogyihiin in socdaalka iyo tamashluhu yihiin qayb ka mid ah nolishiisii – afartii sano ee uu xilka hayey!
Ugu dambeysna, waxay ogyihiin in – Somali iyo beesha caalamkuba- looga quustay in ay ku duxdo dareenka iyo talada dhinaca wanaagsan! Taas oo maanta oo ay taagan tahay in xaaladda welwelka leh Soomaaliya, la caleemo-saaro Madaxweyne KMG ah, isaguna banneeyo Villa Soomaaliya.
Xasan Sheekh iyo Silva Kiir waxay ehel iyo asxaab ku wada yihiin hillinka guuldarrada. Midkoodna kan kale talo-san kuma biirin karo.